rs - Synonyms of rs | Antonyms of rs | Definition of rs | Example of rs | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for rs
Top 30 analogous words or synonyms for rs
ရူပီး "ရူပီး" (Rupee) ကို အတိုကောက် Re. (အနည်းကိန်း)၊ Rs. (အများကိန်း)၊ နှင့် အိန္ဒိယရူပီးငွေအတွက် ₹ (အိန္ဒိယရူပီးသင်္ကေတ) ကို အသုံးပြုသည်။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ The RS-68B engines, based on the current RS-68 and RS-68A engines built by the Rocketdyne Division of Pratt and Whitney (formerly under the ownerships of Boeing and Rockwell International), produce less than half the thrust per engine as the Saturn V's F-1 engines, but are more efficient and can be throttled up or down, much like the SSMEs on the Shuttle. The J-2 engine used on the S-II and S-IVB would have been modified into the improved J-2X engine for use both on the Earth Departure Stage (EDS) as well as on the second stage of the proposed Ares I. Both the EDS and the Ares I second stage would have usedasingle J-2X motor, although the EDS was originally designed to use two motors until the redesign employing the five (later six) RS-68Bs in place of the five SSMEs.
အိန္ဒိယရူပီးသင်္ကေတ အိန္ဒိယရူပီးသင်္ကေတ (သင်္ကေတ: ₹; : INR) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်သော အိန္ဒိယရူပီးငွေအတွက် ငွေကြေးသင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်သည်။ D. Udaya Kumar ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ကာ အိန္ဒိယအစိုးရမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်တွင် အများပြည်သူသို့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သင်္ကေတသည် ယူနီကုဒ်ကာရိုက်တာ ကို အသုံးပြုသည်။ ဤသင်္ကေတကို အသုံးမပြုမီက ရူပီးသင်္ကေတများအဖြစ် Rs၊ Re သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် အိန္ဒိယဘာသာစကားများအလိုက် သင့်လျော်သည့် အတိုကောက်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သင်္ကေတအသစ်သည် အိန္ဒိယရူပီးငွေအတွက်သာ ဖြစ်ကာ၊ အခြားရူပီးအသုံးပြုသည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် သီရိလင်္ကာ၊ ပါကစ္စတန် နှင့် နီပေါ စသည့်နိုင်ငံများကမူ ကိုသာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
စူပါနိုဗာ နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီအတွင်း ကြယ်ဘီလူးကြီးပေါင်းများစွာသည် နောက်ထောင်စုနှစ်အတွင်း ဆူပါနိုဗာဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အကြံပေးထားသည်။ ယင်းတို့တွင် Rho Cassiopeiae, အိသာ ကရိနီ RS Ophiuchi, U Scorpii, VY Canis Majoris, Betelgeuse နှင့် Antares တို့ပါဝင်သည်။ အနီးဆုံး ဆူပါနိုဗာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောကြယ်မှာ IK Pegasi (HR 8210) ဖြစ်ပြီး အလင်းနှစ် ၁၅ဝ အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် Type Ia ဆူပါနိုဗာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ABC-AB Switch အခြေခံ RS-232C ABC ခလုတ်မျိုးကွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဘုံသုံးကိရိယာ (င) အကြား အခြားကိရိယာနှစ်ခု (A or B) ၏ အခြေခံ ABC လုပ်ဆောင်မှုတွင် အပိုထပ်ဆောင်းလျက် ဤခလုတ်က (A or B) ဆက်သွယ်မှုကို ရွေးချယ် လုပ်ဆောင်ခွင့် ရစေသည်။ ABC-AB သည် A-B ဆက်သွယ်မှုကို ဖြတ်သန်းလျက် null modem တစ်ခုအတိုင်း DTE ကိရိယာနှစ်ခု၏ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု ရရှိစေရန် အတွင်းပိုင်းဝါယာ ဆက်သွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တချို့ ABC-AB Switches တို့တွင်'TEST' အမှတ်အသားပြထားသည့် ရွေးချယ်မှုခလုတ်တစ်ခု ပါရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုတွင် A နှင့် B ခလုတ် အနေအထားများရှိ ကိရိယာများသို့ data အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပို့ပေးတတ်သည်။ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်မှုအတွက် အသုံးဝင်သည်။